Waxabajjii 08, 2016
Baatiilee hedduudhaaf eega dura-dhaabannaan jabaan dimookiraaticha ka biraa – Berbnii Saanders irraa ishee mudatee booda, Hilarii Kilinten, kaleessa halkan, dorgommii kaadhimama prezidaantummaa akka injifattee fi dimookiraatota bakka-buuteetti of labsite.
“Galatni isiniif haa tahu, kunoo injifannoo guddaa hunde-qabeessa irra geenyee jirra. Yeroo jalqabaatiif, seenaa biyya keenyaa keessatti dubartiin paartii guddaa tokko bakka-buutee prezidaantummaa Yunaayitid Isteetsiif dorgomuuf jirti.” Jette.
Paartii ishee keessaa kan isheen dorgomaa ture - kan “sooshaalistii dimookiraatawaa” ofiin jedhuu fi wal-caalmaa galii dhabamsiisuu fi eegumsa fayyaa nama hunda dhaqqabsiisuuf akka qabsaa’u dubbachuu isaatiin lammiwwan miliyoona hedduu, keessumaa dargoggota Ameerikaa of duukaa hiriirse – Saandersiinis galateeffattee jirti – Kilinton. Dhimmoonni inni wal-falmii irratti fi duula filannoo irratti kaase Paartii isaanii fi Ameerikaaf gaarii ta’uu dubbatte. Garuu, Kilinteen injifannoo seena-qabeessa kana labsatte iyyuu, Saanders ammaa illee akka isheen dorgomuu itti fufu beeksisee jira.
Waa’ee injifannoo kilinton kana ilaalchisee --- kutaa Ilinoy, aanaa Vermiliyeen keessaa, dame eegumsa fayyaqa keessaa kan hojjettu – ogeettii siyaasaa fi bulchinsaa - durbee Seenaa Jimjimoo haasofsiiseen jira. Seenaan , digirii ishee tokkoffaaf – saayinsii siyaasaa, digirii ishee lammataaf immoo bulchiisa uummataa fi fayyaa uummataa baratte. Gama hawaasa Oromootiin immoo, falmaa mirga Oromootti hirmaachuu irra tartee, daarektora ol’aantuu hawaasa Oromoo Chikaagoo turte. Siyaasa Ameerikaa keessatti illee muuxannoo qabdi – seenaan.
Dorgommii Perezdaantummaa Amerikaa 'Super Tuesday' kalee Hilarii fi Tiraampitti moo’e
Hilarii Kilintonii fi Senator Bernii Sandersi TV irratti bahanii waan egerii ummataa hojjatanii fi waan waliin caalan irratti wal falman